Sandcastle, chirongwa chekuisa Android neLinux pane Apple zvishandiso | Linux Vakapindwa muropa
Mamwe mavhiki apfuura shandisa pano pa blog nhau pamusoro penyaya dzekuuya kweCheckran kuLinux, yatinogona Jailbreak Apple zvishandiso nenzira yakapusa. Ikozvino, chirongwa che chirongwa chakaziviswa iyo inoti inoshandisa bug iyo Checkra1n inoshandisa kukwanisa kuisa Android kana Linux pane iPhone, iPod uye ipad.
Chirongwa ichi chinonzi Sandcastle uye yakaburitswa mazuva mashoma apfuura. Iyi purojekiti iri kungotanga asi kunyangwe zvakadaro yatove neakakosha kumberi Zvakanaka, zvave kutokwanisika kuisa Android pane mamwe maApple zvishandiso, ayo iyo iPhone 7 iye ane "kuwedzera kugadzikana" mune dzidziso sezvo ichiri nezvakawanda zvinhu zvekuchenesa.
Iyo purojekiti inopawo yakashomeka rutsigiro rwePod Kubata 7G uye kuendesa kune akasiyana iPhone 6, 8, X, 11 uye iPod Kubata 6G mhando iri kuenderera.
1 About Sandcastle
Kubudirira kunotungamira apedza timu yakagadzira iyo iPhone Linux chirongwa makore gumi apfuura uye ikozvino uchishanda paCorellium, sevhisi sevhisi ine chaiyo nharaunda ine iOS yevagadziri. Gore rakapera, Apple yakamhan'arira Corellium kumatare ekupfuudza kudzivirirwa kweIOS uye kusunga kifaa (jeri).
Chinangwa chebudiriro ndechekupa vashandisi veApple rusununguko rwekusarudza chikuva uye bvisa marongero akaiswa neApple uye zvisungo pamakomputa. Sekureva kwevagadziri vechirongwa ichi, muridzi wemidziyo ndiye mushandisi akatenga foni, kwete Apple, saka anogona kuisa chero sisitimu yekushandisa pachinhu ichi.
Kuvaka kuri muchikamu chekuyedza Uye sezvatakataura, hadzifukidze zvimwe zvinhu, semuenzaniso kurira, kamera, kumhanyisa kweGPU, kufona kuburikidza nevashandisi venhare havatsigirwe, pakati pezvimwe zvinhu.
Somuenzaniso, zvinotevera zvinhu zvino zvinogona kushandiswa pane iPhone 7: Wi-Fi, Bluetooth, Ratidza Kubuda, Multi-Kubata, Simba Management, I2C, SPI, USB, AIC, NAND Flash, APCIe, DART, uye Tristar Charge Management Chip. Inofananidzwa neiyo iPhone 7, Wi-Fi, Bluetooth, uye multi-touch hazviwanikwe paSandcastle paPod Touch 7G.
Kuti ubvise dziviriro inosunga chishandiso kuApple firmware, checkra1n inoshandiswa kukwanisa jailbreak.
Pakupedzisira iyo firmware inotorwa yakananga kubva kuFlash kifaa uye inochengetwa uchishandisa yakajairwa APFS faira system (chikamu chitsva chakagadzirwa), ichibvumira Sandcastle kugarisana neIOS.
Iyo yekutanga iOS firmware inoponeswa y chero nguva mushandisi anogona kudzoreredza chishandiso chesarudzo yavo munzvimbo ine iOS kana Android.
Kuti uwane iyo APFS faira sisitimu, yakagadziridzwa linux-apfs mutyairi inoshandiswa, inowedzeredzwa nerutsigiro rwekufananidza kumisikidza kwezvikamu uye kugona kushanda nemafuta akaomeswa.
Kunyangwe iyo APFS kuitiswa yakashandiswa inotsigira kurekodha modhi, iyi nzira ichiri kuyedza uye nekutadza, migove yakaiswa mune yekuverenga-chete maitiro (data mune Android nharaunda haina kuchengetwa uye inorasika mushure mekumisikidza).
Iyo projekiti inoshandisa yakashandurwa Linux kernel kuvaka iyo Linux system nharaunda, kuwedzera pakushandisa buildroot.
Iyo Android nharaunda yakavakirwa papuratifomu yeApple 10. Nokusingaperi, iyo OpenLauncher pamba skrini uye Signal Messenger inotangirwa-kuiswa.
Kuisa Android zvinoshandiswa, zvinokurudzirwa kushandisa adb utility, kuwedzera kumaJava APKs anotsigirwa. APK mapakeji ane kodhi inoitiswa yeARMv8 inoda kuvakwazve (iwo mapakeji e ARMv7 haina kutsigirwa).
Finalmente kune avo vanofarira kugona kuyedza ichi chikumbirounogona kuwana rairo yekumisikidza Sandcastle Mune inotevera chinongedzo.
Faira re "README.txt" riri mukati mefaira reZIP rinopihwa inopihwa kurodha pasi. (Mushure mekuisa checkra1n, teedzera setup.sh, loadlinux.c uye Android.lzma mafaera kukombuta uye wozomhanya setup.sh, kuvaka loadlinux, uye kumhanya "loadlinux Android.lzma dtbpack").
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Sandcastle, chirongwa chekuisa Android neLinux pane Apple zvishandiso